News | katrina
News | Tag: katrina
जब कटरीना कैफको मृत्युको हल्ला फैलियो !
एजेन्सी । बलिउड सेलिब्रिटीहरुबारे कहिलेकाही यस्तो हल्ला चल्छ जसले मानिसलाई अन्योलमा पार्ने काम गर्छ कतिपय सामाजिक सञ्जालमा त उनीहरुको मरोको घोषणा समेत हुने गरेका छन् ।
कट्रिनाको विवाहको योजनाः सलमान खान कि अरु नै कोही
स्वार्थी कटरिना !
एजेन्सी । बलिउडमा पछिल्लो समय सलमान खान र कटरिनाको अफयेरबारे पुनः हल्ला चल्न थालेको छ । एकपछि अर्को फिल्ममा कटरिना कैफ र सलमान खान देखिन थालेपछि बलिउडमा उनीहरुको अफयेर फेरि सुरु भएको हल्ला चल्न थालेको छ ।
एजेन्सी । अभिनेत्री क्याट्रिना कैफ र रणवीर कपूरको ब्रेकअपपछि उनीहरुको कयौं फ्यानहरु निराश भएका थिए । तर यो जोडीले ब्रेकअप गरेको तीन वर्षपछि आ–आफ्नो जीवन बिताउन सुरु गरेका छन् । यता अभिनेता राणवीर आफ्नो फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’को को–स्टार आलिया भट्टलाई डेट गरिरहेका छन् ।
जब कटरिनाको सामु गुल्सन ग्रोभर लाजले भुतुक्कै भए
एजेन्सी । बलिउडमा चर्चीत अभिनेता हुन् गुल्सन ग्रोबर । प्राय भिलेन चरित्रमा देखिने उनीसँग काम गर्न डराउनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ । तर, एउटा सिनमा उनी आफैँ डराउन पुगे । कुनै पनि ‘हट’ दृष्यका लागि सहजै तयार हुने कलाकार हुन् । एउटा सिनले भने उनी लाजले पानी पानी भएका थिए ।
जब यी अभिनेत्री मरेको हल्ला चल्यो
एजेन्सी । बलिउड सेलिब्रिटीहरुबारे कहिलेकाही यस्तो हल्ला चल्छ जसले मानिसलाई अन्योलमा पार्ने काम गर्छ कतिपय सामाजिक सञ्जालमा त उनीहरुको मरोको घोषणा समेत हुने गरेका छन् । यस्ता हल्लाको शिकार भइन् कटरीना कैफ ।
कस्तो छ कटरिनाको लाइफस्टाइल